Blockchain News 11.09.2018 - Blockchain News
Gunyana 11, 2018 arun
Canada yokutanga & chete yaidzorwa Bitcoin Fund chinonyengera
Canada yokutanga yaidzorwa Bitcoin Fund akapiwa yakawiriranwa mari mamiriro. Nepo US SEC achiri kushanda musi Bitcoin mari, Canada akatoita kupfurikidza achibvumirana kuti Bitcoin chivimbo Fund, kugonesa aizivikanwa zviri pamutemo vanoita kuita mari muna Bitcoin kuburikidza oga nemari kuronga uye havateri zvavo nemari nhoroondo pakati vamwe.
vanoita Vanokwanisa vawane paakadzidza BTC kuburikidza FBC Bitcoin Trust, asi vasina chaizvoizvo wana, chitoro, uye kutarisira Bitcoin akashandurwa. Marc Van Der Chijs, ari co-muvambi uye CIO Rokutanga Block yakati "With kuita ichi, tikaramba kusunda Canada mberi somutungamiriri nyika yaidzorwa blockchain uye cryptocurrency inivhesitimendi nemotokari. chinangwa chedu ndechokuita kuti upfumi ari digitaalinen mari twa kirasi nyore…"Consensus ari kuti havateri kuona Bitcoin pfuma idanho here huru crypto.
Nasdaq miedzo itsva mudziyo kufembera crypto mutengo kufamba
Nasdaq ingava iri cusp kupa zvechechi vanoita chinhu Analytical pamupendero pamusoro vanotengesa mazana crypto zvinhu. Maererano munhu aiziva nekambani zvirongwa, US Stock Exchange ari kugadzirira kuwedzera midziyo kuti vachifanotaura mutengo kufamba crypto yesangano kwayo Analytics Hub. nomusimboti, kwakatangwa rapera, anokwevera pamusoro muchina pakudzidza uye zvakasikwa mutauro kugadzira (NLP) nezvaanogona kuti parse kuburikidza evanhu vezvenhau uye kumwewo nzira mashoko kupa vanoita nzira nani kuongorora musika sangano.
To dating, asi Analytics Hub yave nezvezvandaifanira chinyakare zvinhu, asi kuwedzera crypto sokuti kuva mumwe chiratidzo Wall Street kuti kufarira nascent zvekutepfenyura. Bill Dague, musoro Nasdaq kwakaita dzimwe mashoko, akati “akapiwa zvakawanda mubereko, tiri kuongorora cryptocurrency ukama datasets.” The mabviro, uyo ari kushanda pamwe Nasdaq riri kuedza, yakanga yakasimba, achiti itsva crypto functionality iri pari kuitwa Beta kuedzwa mberi imwe kanda nangananga November. Basa Chaizopa pfungwa pane zvimwe 500 crypto midziyo, uye kuti zvinotora-pronged matatu vataure ongororo yayo, kutarisa Fund runoyerera Via wallets, mashoko kubva exchanges nemagariro vezvenhau. “Pane evanhu nevezvenhau manzwiro chikamu, kushandisa saka muchina pakudzidza uye NLP, iyo ichatanga Twitter uye zvingasanganisira StockTwits uye pakupedzisira zvichida Reddit,” kunobva akati.
IMF anoudza pamusoro crypto sezvo pamutemo rukuru Marshall muzvitsuwa
The International Monetary Fund akaita zano pamusoro Republic of Marshall Islands’ kuronga yokusuma digital mari sezvo pamutemo nyoro wechipiri pedyo US Dollar. The Marshall Islands - kumaruwa cheni zvitsuwa nechepakati Pacific - vakapfuura mutemo pamusoro nyaya iri February, aiming chawakaronga yacho “Changamire” cryptocurrency kuti vavandudze vemo zvoupfumi uye tidzivise kuwedzera ngozi rudzi tisava akochonorwa kubva yose nemari hurongwa.
zvisinei, zvichitevera nguva zano vakuru kubva muzvitsuwa, kuti IMF akabudisa pepa neMuvhuro ichimuudza pamusoro Kutama. Maererano bepa, Marshall Islands upfumi zvino “zvikuru muyanzvi” pamusoro rubatsiro zvekunze, sezvo nyika anotarisana kugara mamiriro shanduko uye njodzi dzinongoitika dzoga. The chete mudzimba zvokutenga bhengi munyika yava “pangozi yokurasikirwa wokupedzisira US Dollar dzomupepanhau rwezvemabhengi ukama waro mubhengi US nezveBhaibheri,” nokuda akasungirirwa yakafanira kushingaira mhiri zvemari masangano ari U.S.
Kraken Daily Market Mushumo 10.09.2018
$99.7M nhumbi mhiri misika zvose nhasi
Investing - AMAZING DIVIDEND A...
rubato $1 and BECOME A TECHCRA...
Tron Updates - Tether, Japanes...
👍 thumb & SUBSCRIBE NO...
DOMINO'S PIZZA And OTHER MASSI...
Daily Crypto News: Bitcoin Bul...
“Bitcoin Crash ABOUT TO END, W...
Previous Post:Blockchain News 10.09.2018
Next Post:Blockchain News 12.09.2018
Chikumi 26, 2019
Chikumi 25, 2019
altcoin AltCoin Buzz altcoin daily altcoins bitcoin bitcoin ongororo bitcoin bullish Bitcoin tsaona bitcoin tsaona pamusoro bitcoin nhau bitcoin nhau nhasi bitcoin prediction Bitcoin mutengo bitcoin mutengo kukura bitcoin mutengo nhau bitcoin hwokugadzira ongororo bitcoin nhasi misa cheni BTC btc nhau btc nhasi cardano crypto cryptocurrency cryptocurrency musika cryptocurrency nhau cryptocurrency wokutengesera crypto nhau kwavari ethereum ethereum ongororo ethereum nhau ethereum mutengo sei kuti mari bhizimisi bhizimisi bitcoin bhizimisi crypto ari bitcoin kuitwa kurovanya litecoin Neo nhau ripple tron kana kutenga bitcoin xrp